🥇 ▷ ClassDojo iyo Dib u eegista Fasalka Google: midkee ayaa wanaagsan? ✅
ClassDojo iyo Dib u eegista Fasalka Google: midkee ayaa wanaagsan?
ClassDojo iyo Google Classroom waxay ka mid yihiin aaladaha ugu badan ee fasalada qadka-tooska ah ee internetka laga isticmaalo. Labaduba waxay ka mid yihiin xulashooyinka ugu wanaagsan ee xirfadlayaasha waxbarashada.
Isbarbardhigaan, waxaad ku arki doontaa labada si kumeel gaar ah ka dibna waxaa loo isbarbar dhigayaa waji ka waji.
ClassDojo waa barnaamij fasal oo fog oo bilaash ah oo laga heli karo kombiyuutaro, kiniinno, iyo taleefanno. Waxaa loo isticmaalaa in si dhakhso leh loola wadaago macluumaadka, oo ay ku jiraan howlaha, sawirrada iyo fiidiyowyada.
Si kastaba ha noqotee, ClassDojo wuxuu ku siinayaa, adiga oo macallin ah, inaad meelayso qiimayaasha fasalka u gaarka ah. Waxay leedahay lix astaamood oo horay u jirtay oo ay kujirto caawinta dadka kale, kaqeybqaadashada, shaqada kujirto, noqoneyso adkeysi, shaqo adag, iyo dhiiri galin shaqo adag Waxa kale oo aad helaysaa shan qiyam oo taban, sida dhammaystirka shaqaguriga, ixtiraam la’aan, ka maqnaanshaha shaqada guriga, imaanshaha fasalka diyaarsanaanta, iyo hadalka oo aan dhinacna laga jeedin.
Laakiin waad abuuri kartaa qiimayaashaada oo aad u adeegsan kartaa inaad gacan ka geysato sameynta garaaf qaab-deeq ah, oo muujinaya burburka dabeecadaha muddo cayiman. Waalidku waxay marin u heli karaan shaxdan si ay wax uga sii bartaan akhlaaqda carruurtooda fasalka gudaheeda.
Waad la kulmi kartaa waalidiinta si fool ka fool ah, dabcan, laakiin shaxdan ayaa waliba ka caawin karta iyaga inay xoogga saaraan sameynta waxa karaankooda ah inay saxaan dhaqankooda xun ee carruurtooda.
ClassDojo waxay gacan ka gaysataa in la muujiyo waxa ka dhaca fasalka. Waalidiintu badankood way ogyihiin jawaabta gaaban ee “waxba” ee su’aasha “maxaad ku qabatay iskuulka?”. ClassDojo waxay sameyneysaa intii karaankeeda ah inay u oggolaato barayaasha inay ka jawaabaan su’aashan.
ClassDojo wuxuu ku habboon yahay “waalidiinta helicopter”. Haddii tani tahay wax wanaagsan ama in kale ma aha doodda, laakiin barnaamijkan wuxuu sameeyaa wax xitaa ka sii culus. Ku dhiirigeli ardayda inay ku horumariyaan nidaamka ku saleysan dhibcaha. Mid kasta oo ka mid ah qiimayaasha la aasaasay ayaa u xilsaaray dhibco. Ku dhaqaaqida qiyamka wanaagsan waxay miiska u keeni doontaa dhibco badan, halka qodobbada taban loo isticmaali doono in lagu muujiyo qiyamka xun.
Dabcan, carruurtu isma barbar dhigi karaan ujeedooyinkooda, markaa ma ahan tartan.
Qaabkasta oo loo maareeyo maaraynta waxbarashadu waxay miiska u keentaa faa’iidooyinkeeda. Sida ugu badan ee aad qiyaasi karto, natiijada dhamaadka adeegsiga Google Fasalka waa galka qalabka Google marka aad rabto. Fasalka Google wuxuu si guul leh u dhexgalaa codsiyada iyo adeegyada sida Google Docs, Google Sheets, YouTube, iyo adeegyo kale oo caan ah. Dabcan, waad ku istcimaali kartaa aaladahaan nidaamyada kale ee maaraynta waxbarshada, laakiin Google Fasalka ayaa fududaynaya.
Macallimiintu waxay ku dhajin karaan shaqooyinka, qalabka, iyo jawaabta su’aal iyagoo isticmaalaya Fasalka Google.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka muuqda ee fasal Google waa la’aanta doorka si fiican loo qeexay iyo ka warbixinta sare. Si kastaba ha noqotee, waxaad kuxiran kartaa Fasalka Google fasalada nidaamyada kale ee maaraynta waxbarashada oo leh shey fudud. Taasi micnaheedu waa in Fasalka Google uu yahay aag muhiim ah oo ka dhigaya nidaamka maaraynta waxbarashada khibrad isku dhafan oo guud ahaan ka fudud.
Fasalka Google wuxuu miisooyin badan u keenayaa miiska. Taas waxaa ka mid ah wadaagista iyo soo bandhigida shaqada iyada oo loo marayo bogagga Google iyo shirarka fog ee loo maro Google Hangouts.
Qeybta ugu wanaagsan: qof kasta oo leh koonto Google (oo u dhow qof walba) wuu isticmaali karaa app-ka, in kasta oo appku uu ku xiran yahay G Suite for Education. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad martiqaado ardayda iyo waalidiinta waa cinwaankaaga emaylka.
Fasalka Google wuxuu aad ugu fiicanyahay wadaagga agabka, ha ahaato barida fasalka 3aad ama fasalka cunto karinta.
ClassDojo iyo Fasalka Google
In kasta oo labada meeloodba ay yihiin nidaamyo maareyn oo wax lagu barto, haddana labada waa xayawaan aad u kala duwan.
ClassDojo ayaa u diyaar ah fasallo gaar ah. Mid ka mid ah qodobbadiisa iibinta ugu weyn ayaa ah awoodda lagu baro ardayda wax ku saabsan qiimayaasha, halkii ay ka ahaan lahayd mowduuca gacanta ku jira. Sida macalin walbaa ogyahay, fasal kastaa wuxuu si isku mid ah ugahadlayaa barida caruurta qiyamka saxda ah, iyo waliba casharada barashada fasalka.
Fasalka Google ma soo bandhigayo wajigan. Uma qoondeyn kartid ardayda dhibco ku saabsan anshaxa saxda ah ee fasalka. Iyada oo la adeegsanayo ClassDojo, waad ku wadaagi kartaa faylasha, halka Google Classroom Wuxuu takhasusay wadaaga feylasha iyo u adeegida sidii jawiga daruuriga ah ee agabka wax lagu baro.
ClassDojo sidoo kale waxay ku lug leedahay waalidiinta – way ku biiri karaan madal waxayna xitaa u adeegi karaan qayb ka mid ah fasalada kala duwan. Waalidku waxay marin u heli karaan shaxda tabaruca ee u sheegaya waxa ay ugu baahan yihiin inay la shaqeeyaan carruurtooda.
Fasalka Google, ma jiraan doorar rasmi ah. Macallin ahaan, waxaad abuuri kartaa jawi aad waalidiinta ugu yeeri karto qolalka qaarkood. Xitaa waad iskaa u horumarin kartaan jaantusyada cunug kasta, laakiin waxaas oo dhan waxay qaadanayaan shaqo badan. Fasalka Google, in kasta oo loo tixgeliyo nidaam maareyn waxbarasho, wuxuu wax badan ka qabanayaa keenista qalabka waxbarasho miiska adiga, macallinka.
Qalabkee ayaa loogu talagalay?
Taasi ma aha su’aasha saxda ah halkan. Haddii aad raadineyso jawaab, waa kan: isticmaal labadoodaba. Haddii aad raadineyso qalab kaa caawinaya inaad diiradda saarto akhlaaqda ardayga, dadaalada waxbarashada, iyo waalidiinta, la xiriir ClassDojo. Haddii aad raadineyso masrax si qurux badan isugu dhafan oo u keenaya dhammaan aaladaha Google ee waxtarka u leh jawi waxbarasho oo keliya, isticmaal Fasalka Google.
Si kastaba ha noqotee, run ahaantii, waxaad u baahan doontaa inaad diiradda saarto labada dhinacba ee waayo-aragnimada dugsiga.
Adeegsiga ClassDojo iyo Google Classroom oo la isku daray waa habka ugu wanaagsan ee halkan lagu sameeyo. ClassDojo waxay ku saabsantahay diirada saarida qiimaha, dhaqanka, iyo waalidiinta ardayda. Dhanka kale, Fasalka Google wuxuu ku saabsan yahay bixinta qalab quruxsan oo ah qalab maareyn agab.
Ma isku dayday inaad isticmaasho mid ka mid ah qalabkaas? Ma tixgalisay inaad u isticmaasho iskudarka? Haddii ay sidaas tahay, dhagsii faallooyinka hoose oo nooga warran khibradaada.